GIEPE2017 (Fampirantiana herinaratra & fampirantiana jiro iraisam-pirenena any Guangzhou) -News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
GIEPE2017 (Fampirantiana fitaovana elektronika & fampiroboroboana herinaratra any Guangzhou)
FIAINANA: 2019-05-29 HITS: 19
Hetsika: GIEPE20117 (Fampirantiana momba ny fitaovana elektronika sy fitrandrahana herinaratra)
Daty: 11 Aogositra 2017 ka hatramin'ny 13 Aogositra 2017
Famaritana: fampirantiana elektrika sy fitrandrahana elektrika (GIEPE2017) i Shina (Guangzhou) fampirantiana iraisam-pirenena (GIEPE2017) no fampirantiana matihanina sy manam-pahefana indrindra amin'ny sehatry ny fitaovana elektrika mipoaka fipoahana any amin'ny tanibe China. Amin'ny maha iray amin'ireo foibem-barotra lehibe indrindra amin'ny fitaovana herinaratra petrochemical sy explosion-proof any Asia, dia atao isan-taona amin'ny volana Aogositra ao Guangzhou, miaraka amin'ny fampirantiana miaraka, China Guangzhou Int'l Petrol & Chemistry Industry Exposition. Ireo mpampiranty ny GIEPE350 dia hahatratra 25,000 mahery, handray XNUMX? Ry faritra fampirantiana; Ity fampirantiana ity dia misy fizarana efatra, ao anatin'izany ny fampirantiana vokatra, forum, fivarotana ary ny fifandraisana amin'ny varotra ary koa ny kaonferansa fifanakalozana traikefa. Koa manantena ny fandraisan'anjaran'ity hetsika ity izahay!
Araka ny fantatsika rehetra, ny fitaovana elektrika azo antoka amin'ny fipoahana, ao anatin'izany ny fitaovana fanamafisana isan-karazany, ny fanaraha-maso, ny fitaovana fampitaovana fiarovana ary ny fitaovana lehibe hafa, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny tetikasa sasany amin'ny indostria solika sy simika. dia ilaina amin'ny sehatra hafa. Miaraka amin'ny fampandrosoana maharitra sy haingana ny toekarem-pirenena hatramin'ny faran'ny drafitra dimy ambin'ny folo taona niorenan'i Shina hatramin'ny taona 2020, ny orinasa mpamokatra fitaovana ho an'ny herinaratra porofon-tsipoapoaka dia hihaona amin'ny tsena lehibe ary hitombo hatrany ny fangatahana fitaovana mifandraika amin'izany amin'ny sehatra sasany. , ao anatin'izany ny indostrian'ny petrochemical, ny indostrian'ny simika arintany, ny indostrian'ny angovo, ny indostrian'ny metalurgique, ny indostrian'ny lamba snsGuangzhou dia misongadina amin'ny lanjany maharitra sy stratejika ary misy akony amin'ny tombotsoan'ny firenena. Ny indostrian'ny petrochemical matanjaka, ny indostrian'ny lamba, ny indostrian'ny fitehirizana sy ny fitaterana, ny indostrian'ny fivarotam-panafody ary ny sisa dia hamaritana i Guangzhou no tsena mpanjifa-porofo mipoaka porofo mahery vaika any Sina. Noho izany, ny GIEPE dia nanangana faritra manokana hanehoana ireo fitaovana elektrika tsy misy fipoahana miaraka amin'ny kalitao avo ho an'ireo mpividy matihanina ao amin'ny Guangzhou China Import sy Export Fair Pazhou Complex.
Araka ny fantatsika rehetra, ny fitaovana elektrika mipoaka dia ilaina amin'ny indostria petrochemical, indostrian'ny harena ankibon'ny tany, indostrian'ny herinaratra, indostrian'ny metallurgical, indostrian'ny fitaterana solika sy entona sns. taona maro, ny indostrian'ny fitaovana elektrika nipoahan'ny fipoahana China dia fampandrosoana lehibe tokoa ary ny filan'ny tsena isan-taona dia nitombo hatramin'ny 15% ka hatramin'ny 20%.
Ao anatin'ny roapolo taona ho avy, i Shina dia mbola hiankina amin'ny arina amin'ny fifangaroan'ny angovo ihany; ary ny indostrian'ny petrolémika, herinaratra, metallurgical China dia hitohy hafana; ankoatr'izay, ny governemanta sy ny orinasa dia hijery bebe kokoa amin'ny mpiasa? ˉ fiarovana sy fahasalamana ary ny fahombiazan'ny vokatra. Ka ireo antony ireo dia hifamatotra amin'ny fanatsarana ny indostrian'ny fitaovana herinaratra mipoaka. Ireo orinasam-pamokarana ho an'ny fitaovan'ny herinaratra porofom-pipoahana dia hihaona amin'ny tsena midadasika sy ny famakafakana ataon'ny manam-pahaizana ary haminavina fa ny fangatahana fahaiza-manao lehibe sy ny fitaovana marani-tsaina fitaovana elektrika dia hitazona ny fitomboany isan-taona mihoatra ny 20%. Midika izany fa ny indostrian'ny fitaovana herinaratra-nipoaka dia hanana tsena lehibe ao Shina.
Fampirantiana herinaratra sy fampirantiana teknolojia any Shina iraisam-pirenena
Inona no dikan'ny porofon'ny fipoahana